﻿ ‘वडाको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छ’
देशभर २८ सय ५६ जनामा कोरोना पुष्टि, ५ जनाको मृत्यु
देशभर थप २२ सय २५ जनामा कोरोना पुष्टि, १३ जनाको मृत्यु
‘वडाको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छ’
शुक्रबार ०९, साउन २०७७
वडामा के–कस्ता समस्या आउँछन् र ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर हामीले रामधुनी वडा नं. २ का वडा सचिव घनेन्द्र कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौं । न्युजलयका लागि ज्योती पोख्रेलले गरेको कुराकानीः
आजभोलि के मा व्यस्त हुनु हुन्छ ?
आजभोलि म कार्यलयको नियमित काममा नै व्यस्त छु ।
सामान्यतया बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भौतिक निर्माण, सामाजिक विकासको कार्यहरु तीव्र रुपमा भईरहेका छन् ।
वडामा के कस्ता समस्याहरु रहेका छन् ?
वडामा उपभोत्ता समिति मार्फत काम गराउँदा एक पटकमा कुरा नबुझिदिने, सबै कागजपत्रहरु कर्मचारीले नै मिलाइ दिनुपर्ने लगायतका समस्याहरु छन् र हामीले त्यसलाई सहजिकरण गर्दै जनताको कामहरु सर्वसूलभ रुपमै गरिरहेका छौं ।
वडाबासीहरु के–कस्ता समस्याहरु लिएर आउने गर्छन् ? त्यस्ता समस्याहरु कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
सामान्यतया गाउँका बासिन्दाहरु निवेदन बिना नै कार्यलय आउने गर्छन् । अपूरा कागजपत्र साथै आवश्यक कागजपत्रहरु हेरेर त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिने साथै सक्दो सहयोग गर्ने गरेका छौं ।
झै–झगडा, मुद्दा मामिलाको विषयका समस्याहरु कत्तिको आउने गर्छन् ?
त्यस प्रकारका समस्याहरु पनि आउछन् । अत्यधिक मात्रामा चाही घरायसी विवाद, सामान्य झै–झगडाका मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
सुरुवाती दिनबाट आजसम्म के–कस्ता विकास निर्माणका कामहरु भए ?
मुख्य विकास निर्माणको बाटोघाटो नै हो । त्यसका साथै महिला लक्षित कार्यक्रमहरु, जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरु साथै उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।
कार्यलयमा आएका समस्याहरु कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
कार्यलयमा आएका समस्याहरु भनेको योजना सम्बन्धि कागजातको बारमा नै हुन् । कागजात अपूर्ण भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुझाव दिने गछौं । सबै कागजपत्र तयार पारी आएमा हामीले सहज रुपमा काम सम्पन्न गर्दिएका छौं ।
यो रामधुनी वडा नम्बर २ लाई अझ विकास गर्न के के गर्नुपर्छ ?
नेपाल सरकारबाट आउने अनुदान रहेको छ, त्यसमा वृद्धि भएर आउदा थप विकास निर्माणको काम सम्पन्न हनेछ ।
यस वडाको आगामी योजना के–के रहेका छन् ?
आगामी योजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरु रहेका छन् । अहिले १ करोड २७ लाख भौतिक योजनाको बजेट रहेको छ । लक्षित वर्ग, सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु रहेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा युवाहरुको लागि के–कस्ता योजना तर्जुमा गर्नु भएको छ ?
महिला लक्षित योजनामा विभिन्न सिपमूलक तालिमहरु रहेका छन् । युवाहरुको लागि उनीहरुको सर्वाङ्गिण विकासका योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।
हाल कोरोना संक्रमण विरुद्धमा के–कस्ता उपायहरु अपनाइएको छ ?
कोरोना संक्रमणको विरुद्धमा वडाले भन्दा पनि नगरपालिकाले बिरबिरे फारममा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । हाम्रो वडामा पनि त्यस्तो जानकारी पाउने बित्तिकै एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर बिमारीहरु ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्न गरिरहेका छौं ।
अन्त्यमा वडाबासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
वडाबासीहरुमा आफ्नो जे समस्याहरु रहेका छन् ती समस्याहरु अप्ठ्यारो नमानीकन वडामा आएर कर्मचारीहरु मार्फत सहज रुपमा सम्पन्न गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
‘सञ्जय होटल तीन पुस्ताले चलाइसकेका छौं, अझैं नयाँ पन दिँदैछौं’
‘साई मेडिकलले स्तरीय र सुलभ सेवा दिइरहेको छ, अब रामधुनीमा अस्पताल खोल्ने तयारीमा छौं’
जंगलमा च्याउ खोज्न गएका साला भेनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु
अब ह्वाट्सएपको वेब भर्सनबाट पनि कल गर्न सकिने
कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल ३४ औँ स्थानमा